လှကျော်ဇော ● မေမေရဲ့အစားထိုး ‘သား’ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒါပေမဲ့ မေမေက အင်မတန်ပါးပါတယ်။ ဒီကြားထဲ ကျမတို့သားအဖတတွေ ညတညမှာ မြေပုံတချပ်နဲ့ စကားပြောနေတာ သူ တွေ့ထားပြီးပါပြီ။ ဒါကြောင့်သူက သူပါလိုက်မယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။ ကျမကပဲ “မေမေ – အားလုံးပျောက်သွားရင် သူတို့ ချက်ချင်းသိမှာ၊ ဘယ်သူမှ မလွတ်နိုင်ဘူး၊ မေမေက ဟန်မပျက်နေခဲ့ပါ။ မေမေ သူတို့ကို ၅ ရက်၊ တပတ် ဆွဲထားနိုင်ရင် လှလှတို့ လွတ်ပြီ၊ လှလှတို့ဟိုမှာ အခြေကျရင် မေမေ့ကို ပြန်လာခေါ်မယ်” လို့ ဖျောင်းဖျရပါတယ်။
ကဲ .. အဲသလောက် မေမေဟာ ဒီအစားထိုးသားလေးကို ချစ်ရှာပါတယ်။ ဒါတွေကို သိလို့ပဲ။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဗဟိုရုံး အာဏာ သိမ်းခံရစဉ်က တရုတ်ပြည်ဘက်ကမ်းထွက်ပြေးကြရတဲ့ ဗဟိုရုံးက ရဲဘော်တွေကို နေရာချ၊ ထိန်းသိမ်း၊ စောင့်ရှောက် လုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့ ရဲဘော်ထွန်းမြတ်ကို နေရာချရေးတာဝန်ခံခေါင်းဆောင် (နိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်) ရဲဘော်တင်ရီ (ပဲခူး-နေဝင်း) က “ကဲ … ကဲ … ရဲဘော်ထွန်းမြတ်၊ ဒီအလုပ်တွေ အသာထား၊ သွား … ခင်ဗျားအမေကြီးနားပဲနေ၊ ဟိုမှာ တရှုံ့ရှုံ့ငိုနေတာ၊ ခင်ဗျားသွား စောင့်ရှောက်ချေဆိုပြီး မေမေ့အနားသွားနေဖို့ တာဝန်ပေးလိုက်သတဲ့။ မေမေကလည်း အဲဒီ တုန်းက ကျမတို့ မောင်နှမသုံးယောက်စလုံး ပန်ဆန်းမှာကျန်ခဲ့ပြီး၊ ဘာသတင်းမှမရလို့ တငိုငို တယိုယို ဖြစ်နေတာပဲ။ အဲဒီတုန်းကလည်း ဖေဖေနဲ့ မေမေ နောက် ကိုထွန်းမြတ်ပဲ သားအဖြစ်လိုက်ပါပြီးစောင့်ရှောက်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
One Response to လှကျော်ဇော ● မေမေရဲ့အစားထိုး ‘သား’
Catwoman on January 1, 2017 at 3:49 pm
In this life and in samsara, there can be many teachers. I am glad Buddha is my teacher for we can find many wrong teachers and do wrong things and have consequences esp if we can’t let go of self.
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month April 2018 (139) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ကိုသန်းလွင် ● ဆော်ဒီမင်းသား၏ အမေရိကန်ခရီးစဉ် https://t.co/2V0n7T5ZbS https://t.co/safEaTCfYc about 52 minutes ago ReplyRetweetFavorite
ဇင်လင်း ● ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေး အရွေ့သစ် အစပြုနိုင်တော့မည်လား … https://t.co/s0Ee6kR032 https://t.co/Vc4YSSOLir about 23 hours ago ReplyRetweetFavorite